Sida timaha loogu hagaajiyo timo qurxinta | Ragga Stylish
Timo Wanaagsan Maalintii oo dhan - Tilmaamo ku saabsan qaabeynta timo-jare leh timo-jare
Waxaan ka hadalnay in kabadan hal jeer ahmiyada ay leedahay xirashada timo jarista ku haboon saamiga wajigeena, laakiin Faa'iido maleh inaad timo timahaaga subaxa hore haddii aadan codsanin waxyaabaha hagaajinaya sida jel, wax ama lacquer.
Waana taas, iyada oo aan wax laga hortagin jirin, timuhu waxay u muuqdaan inay ku laabtaan booskooda dabiiciga ah, iyagoo furaya timaheena, sidaas darteedna, kharribka muuqaalkeenna saacado gudahood ama xitaa daqiiqado, waxay kuxirantahay qaabdhismeedka timaha qof walba. Marka markan, waan kuu soo bandhigeynaa tilmaamaha isticmaalka timaha, badeecadeena aan ugu jecelahay seddexda.
Tan koowaad waa soo qaado timo wanaagsan, taas oo aan noqon doonin mid ka mid ah kuwa ugu caansan ama ugu qaalisan, laakiin midka ugu awoodda badan hagaajinta. Nelly hairspray waxay kaa caawin doontaa timahaaga inay ku sii jiraan meesha ilaa sideed saacadood, marka lagu daro, waa mid ka mid ah kuwa ugu raqiisan dukaanka (ma gaarto 2 euro). Ku habboon isticmaalka maalinlaha ah.
Hadda oo aan haysanno badeecada, waa waqtigii lagu dabbaqi lahaa timaha, laakiin marka hore waa inaad siisaa timaha timaha qaabka la rabo, labadaba marka la eego jihada xargaha iyo mugga, maadaama aysan macquul noqon doonin intaas ka dib. Marka aan helno timo badan ama ka yar sida aan u jecel nahay, waxaan kudarsaneynaa lacquer 20 ama 30 sentimitir fog. Intaa ka dib, waad samayn kartaa xoogaa taabasho ah, laakiin adoo isticmaalaya gacmahaaga ama sugaya in badeecadu qalasho haddii aan u baahanahay inaan shanka marino meel kasta mar labaad. Si loo dedejiyo hawsha, waa mid aad u faa'iido badan in la isticmaalo timo qalajiye, taas oo sidoo kale ah qalab muhiim ah markaad raadineyso timo muuqaal leh, sida tan ay muujiyeen Zayn Malik iyo Zac Efron sawirka madaxa.
Lacagaha badankood si fudud ayaa looga saari karaa cadayashada, taas waa sababta, si ka duwan jel, ay si dhib leh u niikiso timaha. Maalinta ku xigta, isla hawshaas waa la soo celiyaa waxayna qaadan kartaa afar ama shan maalmood oo la marinayo lagana saarayo timaha ilaa ay lagama maarmaan tahay in timaha la dhaqo Xusuusnow in lagugula talinayo inaadan madaxaaga dhaqin wax ka badan laba jeer usbuucii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » Timo Wanaagsan Maalintii oo dhan - Tilmaamo ku saabsan qaabeynta timo-jare leh timo-jare
Daniel Craig, oo ah James Bond oo xirta Tom Ford